Madaxda dalalka Qadar iyo Turkiga oo ka wada hadlay Arrimaha Gobolka Bariga Dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxda dalalka Qadar iyo Turkiga oo ka wada hadlay Arrimaha Gobolka Bariga...
Madaxda dalalka Qadar iyo Turkiga oo ka wada hadlay Arrimaha Gobolka Bariga Dhexe
Muqdisho( SONNA) Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan iyo Amiirka dalka Qadar Sheekh Tamiin Bin Axmed Al-Tani oo khadka isgaarsiinta ku wada xiriiray ayaa ka hadlay xaaladda dalka Suuriya iyo qadiyadaha caalamka sida laga soo xigtay Madaxtooyada dalka Turkiga.
Sidoo kale Labada hoggaamiye ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen xiriirka labada dal,xiisadda mandiqada iyo waxyaabaihii ka soo baxay kulankii todobaadkii tagay dhex maray iyo waxyaabihii ay ku heshiyeen hoggaamiyeyaasha labada dal Turkiga iyo Ruushka.
Waxayna labada dhinac ugu baaqeen mucaaradka Suuriya inay ka qeyb galaan shirka dhexdhexaadinta dhinacyada dagaalka isaga soo horjeeda Suuriya oo la filayo inuu dhawaan ka dhaco dalka Ruushka.
Dhanka kale Madaxweynaha Rushka Vladimir Putin ayaa la sheegay in xiriirka xagga khadka Taleefoonka ah uu la yeeshay Amiirka dalka Qadar Sheekh Tamiin Bin Axmed Al-Tani ayna ka wada hadleen arrimaha shirkaasi dhexdhaxaadinta ah ee la filayo inuu ka qabsoomo dalka Ruushka iyo waliba arrimaha xiriirka labada dal ka sokow midda dowliga ah.
Previous articleMaleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab oo ka qaxay deegaano ka tirsan Gobolada Jubooyinka iyo Shabeellaha Hoose
Next articleUnicef oo ka deyrisay xaalada Nolasha Caruurta Yeman